Himalaya Dainik » रुकुम घटना- १२ दिनपछि धेरै डरलाग्दा तथ्यहरु बाहिरियो ! यसरी फसाएर ज्यान लिईएको रहेछ- नवराज र साथीहरुको (भिडियो हेर्नुस)
२०७७ जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँकी ती किशोरीले नवराज विश्वकर्मालाई सम्पर्क गरिन् । आफ्नो परिवारले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको तर आफूले स्वीकार नगरेको बताउँदै आफूलाई लिन साथीहरूसहित आउन आग्रह गरिन् । नवराजले १९ जना साथीहरूलाई साताअघि नै छिट्टै प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने योजना बनाएको भन्दै सघाउन सहयोग मागेका थिए । तर पछिल्लो म्यासेज आएपछि उनीसँग कुर्ने धैर्य भएन । त्यसपछि के भयो ? भिडियो हेर्नुस
प्रकाशित मिति २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २१:२६